Summer Program – Nay Pyi Taw International Science academy
နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်တွင် ကလေးများအတွက် ပြင်ပဗဟုသုတများကို လေ့လာနိုင်ဖို့ Nay Pyi Taw International Science Academy မှ Summer Program များကို ဖွင့်လှစ်ပေးတော့မှာ ဖြစ်ပါကြောင်းလေးစားစွာအသိပေးအပ်ပါသည်။
မိဘများသည် ၎င်းတို့၏ကလေးများကို ကျွန်ုပ်တို့၏ Summer Program အစီအစဉ်သို့ စေလွှတ်ရန်ရွေးချယ်ရသည့် အဓိကအကြောင်းရင်းများထဲမှတစ်ခုမှာ အဆိုပါအတန်းများသည် ကျောင်းသားများအား ပညာရေးတွင် ရှေ့သို့တက်လှမ်းစေပြီး နောက်တစ်ဆင့်သို့ ခြေတစ်လှမ်းပိုမိုနီးကပ်စေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
နွေရာသီကျောင်းသည် ကျောင်းသားများ၏ အလုံးစုံ သင်ယူမှုအတွေ့အကြုံကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည့် ကျောင်းသားများအား မကြာခဏ အပြုသဘောဖြင့် တုံ့ပြန်နိုင်သည့် ပိုမိုစိတ်အေးလက်အေး သင်ယူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း ပေးပါသည်။ အောင်မြင်သောနွေရာသီကျောင်းအတွေ့အကြုံတစ်ခုသည် ကျောင်းသားတစ်ဦး၏ မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုကို မြှင့်တင်နိုင်ပြီး ၎င်း၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့် ပညာရေးဆိုင်ရာ မျှော်လင့်ချက်များကို မြှင့်တင်နိုင်သည်။
မိဘများ၏ကလေးအား အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသော အစီအစဉ်တစ်ခုက စောင့်ကြိုနေပြီး ၎င်းတို့သုံးစွဲသည့်အချိန်များသည် ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းပြီး အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည်ဟု အာမခံနိုင်ပါသည်။
Nay Pyi Taw International Science Academy will launch Summer Programs for children to learn outside knowledge during the summer holidays.
One of the main reasons parents choose to send their children to our Summer School program is that these classes help students get ahead academically and take one step closer to the next level.
Summer School also offersamore relaxed learning environment that students often react positively to, which can enhance their overall learning experience. A successful summer school experience can boostastudent’s self-esteem and raise his or her personal, academic expectations.
A very exciting program awaits your child and you can be assured that the time they spend will be enjoyable and productive.